Goatemala: Teknolojia sy Tranonkala, Lohahevitra Amin’ny Fampisehoana Lahatsary Maharitra 120 Segondra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2017 9:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Fango 120 sekondra
120 Segundos dia iray amin'ireo tetikasa vaovao avy amin'ny fiarahamonina Maestros del Web. Avy amin'ny dika ara-bakiteny Espaniola ny teny hoe Webmaster ny anaran'ny fiarahamonina ary mikasika ny teknolojia, fandrindrana sy famoronana tranonkala ary koa iray amin'ireo sehatra fifanakalozan-kevitra amin'ny teny Espaniola mavitrika indrindra. Herintaona lasa izay, nanomboka namokatra votoatin-dahatsary ho an'ny habaka izy ireo, mamintina votoaty antserasera mba hampisy vaovao 120 segondra amin'ny teny Espaniola.
Ohatra ity iray ity, izay natao tamin'ny volana Desambra, ary mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny Habaka Foros del. Milaza tantara fohy, tantara mampihomehy sy hafahafa mikasika ireo zavatra nitranga tamin'izy ireo tao amin'ny forum ireo mpikambana ao. Ohatra: mpikambana iray avy ao Arzantina niresaka ny fomba nandrahonan'ny mpisera forum iray azy, izay nilaza fa hiampanga azy ho nanaparitaka viriosy raha toa ka tsy manampy azy amin'ny olany izy. Namaly fangatahana fanampiana hamorona fango kosa ny mpikambana iray hafa ao amin'ny Forum: namaly izany izy, saingy avy eo novain'ilay olona nangataka fanampiana ny loko ary ankehitriny, lasa fangon'ny orinasa izany, tsy mba nisy ny fandoavam-bola. Nilaza momba ny loza amin'ny fandraisana anjara amin'ny forum ihany koa ny mpikambana Espaniola iray: nahatonga azy ho saika mpanondrana antsokosoko fromazy sy lambosira (jambon) ny forum.
120 Segundos: algunas anécdotas de Foros del Web avy amin'ny 120 Segundos tao amin'ny Vimeo.
Ity manaraka ity kosa dia toe-javatra matotra kokoa: mitantara i Stephanie Falla, mpampiantrano fandaharana amin'ny tranonkala fa niharan'ny halatra anarana sy ny mombamomba azy tamin'ny Febroary 2009 i Christian Van Der Henst S, Webmaster iray ao amin'ny fiarahamonina, raha nosovohan'ny olona piraty ny kaontiny fitantanana tranonkala, ary avy ao no nanakanana ny fidirana tamin'ireo tranonkala lehibe hafa sy tolotra mailaka sy ny tambajotra sosialy. Izany no fototra ampiasaina mba hanomezana toro-hevitra mikasika ny fiarovan-tena manoloana ireo loza ireo: mba tsy hiditra amin'ny tranonkala lehibe amin'ny alalan'ny tambajotra tsy voaaro, manova tenimiafina sy mampiasa tenimiafina azo antoka alohan'ny hidirana amin'ny torohevitra hafa.
120 Segundos: experimentando el robo de identidad en carne propia avy amin'ny 120 Segundos tao amin'ny Vimeo.
Ity farany ity kosa dia mifantoka amin'ny fomba fiasa mamokatra avy any an-trano. Miresaka momba ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny asa any an-trano, toy ny tahiry azo avy amin'ny tsy fivezivezena, fihinanana sakafo atoandro any ivelany ary tsy mila mividy akanjo manokana hiasana, fa misy koa ny sasany amin'ireo fandrika; miteraka vokatra ambany ny tsy fahampian'ny rafitra, tsy manome fotoana hanaovana zavatra manokana tsy misy ifandraisany amin'ny asa sy fandaniam-potoana. Ny sasany amin'ireo toro-hevitra dia ahitana: fametrahana fandaharam-potoana, fampiasana fitaovana an-tserasera hanaraha-maso ny asa sy fampahatsiahivana, mametraka birao ao an-trano hiasàna, ary koa manokana fotoana ho an'ny tena: mikarakara fahasalamana toy ny fanaovana fanatanjahan-tena sy misakafo ara-pahasalamana.
120segundos: trabajar desde casa productivamente avy amin'ny 120 Segundos ao amin'ny Vimeo.